Fagersta oo soo bandhigtay qorshe Soomaalida ganacsiga lagu barayo | Somaliska
Fagersta oo soo bandhigtay qorshe Soomaalida ganacsiga lagu barayo
Kamuunka Fagersta ee gobolka Västmanland oo ay ku noolyihiin Soomaali garaaysa 300 qof.,ayaa bilihii la soo dhaafay waxay doonayeen in Soomaalida laga caawiyo sidii ay u fahmi lahaayeen sida ganacsi looga sameeyo Sweden. Kamuunka ayaa waxa uu hawsha u dhiibay 7 arday oo waxbarasho sare ka dhigata jaamacadaha ugu waaweyn Sweden sida Umeå Universitiet iyo Chalmers tekniska högskola.
Ardada ayaa laga dalbaday in ay soo bandhigaan qaab fudud oo Soomaalida loogu dhiiri galin karo ganacsiga isla markaana lagu fahansiin karo sida wadankaan ganacsi looga abuuro. Ka dib dhowr isbuuc oo wareysiyo iyo baaritaano ku saabsan dhaqanka Soomaalida, xaalada Soomaaliya iyo iwm ayaa shalay waxay ardadii soo bandhigeen qorshahooda.
Bandhiga oo ay ka soo qeyb galeen maamulka ugu sareeya kamuunka sida gudoomiya degmada, ayaa lagu bilaabay xaalada Soomaalida oo laga waramay. Ardada ayaa sheegay in Soomaalidu yihiin dad ganacsiga ku wanaagsan wadankooodii iyo wadamada kale balse halkaan ay ku jiraan xaalad adag.
Ardada ayaa waxay soo bandhigeen qorshe ka kooban sadex qeybood oo ay ugu horeyso in Soomaalida loo qabto seminaar lagu dhiiri galinayo in ay ganacsiga sameystaan, oo ay bixiyaan dadkale oo Soomaali ah oo wadanka horumar ganacsi ka sameeyay. Talaabada labaad ayay ku soo bandhigeen koorso gaaban oo Soomaalida lagu barayo dhamaan waxyaabaha ay u baahanyihiin sidii ay ganacsi uga sameyn lahaayeen Sweden, koorsda ayaa lagu bixinayaa Af-Soomaali. Talaabada ugu dambeysa ayay soo bandhigeen foomamkii la buuxin lahaa oo aad loo fududeeyay oo sawiro lagu sameeyay si qofkasta u fahmo.
Arinta ay soo bandhigeen ardaydaan ayaan aad ula dhacay runtii oo aan isleeyahay waa mid wax ku ool ah. Kamuunka ayaa sheegay in ay arintaan ka dhabaynayaan oo sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku qaban doonaan seminaarka ugu horeeya qorshaha. Haddii Soomaalidu ay muujiyaan rabitaan ku aadan arintaan, isla markaana ay si niyad ah uga qeyb qaataan koorsada ayay arintaan noqon kartaa mid guul laga gaaro. Kamuunka Fagersta ayaa u muuqda mid ay daacad ka tahay sidii ay Soomaalida u caawin lahaayeen, isla markaana kor ugu qaadi lahaayeen xaalada guud ee degmada.
asc hada fakarkeyga ka dhibto runtii wa arin aad u wngsan guulna u ahan shacabka ku dhaqan magaladas
Asm clkum. Aniga waxay ilatahay waa arin fiican waana muhiim waxyaalaha ay ardadaan ay soo bandhigeen. Laakiin waxaa moodaa in ay hal cilad ilaaween oo ah tan Ugu daran oo ah in aysan soomaalidu “daynta ribadu kujirto” taasoo aan u arko in ay tahay mida ugu wayn ee nahortaagan. Waxay ilatahay in ay dhahaan amaahda ugu horeeysa dulsaarka halagadaayo soomaalida. Ama bangiyada islaamka haloo sahlo in ay wax kasoodaynsankaraan! Taas ayaan qabaa in ay ayaga iyo soomaalidaba horumar u horseedilahayd.wsc wr,wbr.
ASC/ ramadaan mubaarak dhamaan walaalaha ku xiran webka meel kasta oo ay jogaan aduunka,,waxaan kaloo halkaan salaan uga dirayaa jimcale, mahad sanid, kadib hal su,aal ayaan rabaa inaan ku wey diiyo jimcale waxayna tahay kaliya magaalaada aad sheegtay miyaa laga bilaabayaa qorshahaas mise waa sverige oo dhan ASC
Walaal hada waa Fagersta oo keliya balse waxaa laga yaabaa in ay ku tusaale qaataan kamuunada kale marka laga bilaabo halkaan.
August 16, 2012 at 16:17
Runtii waa arrin wanaagsan oo dhinaca wanaaga loo qaaday waanan hubaa iney soomaali badani aad u daneynayaan iney ganacsiyo ay leeyihiin furtaan. Waxaase dhibta ugu weyni ka imaan doontaa waa deynta ay bankiyadu bixiyaan oo wadata räntada amase dulsaarka. Ribadu maahan wax dhib yar marka aduunka la joogo aakhirana maahan wax ku wanaagsan inuu qof muslim ahi qaato waana wada ognahay waxa ay diinteenu ka qabto ribada. Haddii lacag deyn ah oo leh waqti go’an oo lagu soo celinaayo iyadoo aan wax ränta ahi la socon waa okey.
August 16, 2012 at 22:13
ASC walalaha somalida ah ee ku xiran webkaan hadan ka dhiibto aragtidayda waa wax wanaagsan waxaa kasii wanaagsanaan laheed in canshuur dhaaf loo sameeyo ama laga yareeyo mudo kooban dadkaas hela fursadaas iyo lacago deyn ah oo ribo laheen mudo kooban oo dada shirkado yaryar samaystaan waa ok
August 17, 2012 at 04:44
jimcale sxb waa wax wanaagsan,,laakin gobolada somalida ku badan ayaa fican in mashruucaas laga fuliyo
August 17, 2012 at 22:23
Ganacsigu wuxuu rabaa kharash iyo dadaal dheer somali duql qaad maleh swedena lacagi mataal lagu ganacso ee meela kale u ganacsi taga sida africa.Tankale markii qofku badeeco keeno waxay u baahantahay mushtamac gata sweden waxaa dadka oo dhan ku xiran yihiin ICA,LIDL,WILYS MANA la tartami karno kuwaas marka ma waxaa laga wadaa dukaan hilib xalaal furo oo adinku wax kala gata taasi waa fikar qaldan swedena kama muuqdo suuq shaqo ee kafiirsada 15 ayaan muuq ku dhexjray waligay sweden meelka suuq xun ma arkin 19 jeer ayan isku dayay in aan wax sameeyo wayna dhici wayday.